မြစ်ဆုံ: ရုံးပိတ်ရက်လေးမှာ အပန်းဖြေကြရအောင်
အလုပ်တွေ စာတွေနဲ. ပင်ပန်းနေကြတဲ. မိတ်ဆွေများအားလုံး ဒီတစ်ပါတ်ရုံးပိတ်ရက်လေးမှာ အပန်းဖြေနိုင်ဖို. အတွက် ဟာသ ဇတ်လမ်းတိုလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ညစ်နေတဲ. စိတ်များလည်း လန်းသွားစေရမယ်။ ရယ်မော သံများဖြင်. ပတ်ဝန်းကျင်ကို သာယာအောင်လုပ်ပေးကြရအောင်။ မောင်မောင်
လည်း ကိုယ်ပိုင်အားလပ်ချိန်လေးတွေမှာ ဒီလို ဟာသလေးတွေကြည်.ပီး စိတ်အပန်းဖြေတတ်ပါတယ်။ ပန်းခြံတွေ ၊ ကမ်းခြေ တွေ ပျော်ပွဲစားထွက်တာတွေကို မသွားနိုင် မလုပ်နိုင်လို. ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ရဲ. အရေးအကြီးဆုံး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လန်းဆန်းရွှင်မြူးသွားဖို. တော. လိုအပ်တယ်နော်။
ကြည်.ပီးသူများလည်း နောက်တစ်ခေါက်ပေါ.။ မကြည်.ရသေးသောမိတ်ဆွေများကြည်.ဖြစ်အောင်ကြည်.နော်။